Qeybta:Ogaysiiska19 min akhris
Soo kicinta lama filaan ah ee masiibada ayaa si aad ah noo xusuusineysa waxaan aad u jecelnahay.
McKnight, waxaan qiimeyneynaa daacadnimada sayniska iyo shaqada cilmi baarayaasha, saraakiisha caafimaadka dadweynaha, iyo jawaabayaasha caafimaadka. Waxaan qiimeyneynaa sinnaanta, inagoo ka feejigan in Covid-19 ay saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelaneyso bulshooyinka gaar ah. Oo waxaan qiimeyneynaa ka mid noqoshada, taas oo micnaheedu yahay inaan diidno dadaal kasta oo aan ugu adeegsaneyno caqabadadan caafimaad ee bulshada si aan u beero qeybsi ama aan takoorno.
Maaddaama aan sii wadno kormeerista la xiriirta sheekada coronavirus ee novel, waxaan mudnaanta siineynaa wanaagga shaqaalaheena, deeq bixiyeyaashayada iyo la-hawlgalayaasha kale, iyo beesheena maxalliga ah iyo tan caalamiga ahba. Waqtigani waa wakhti la isugu yimaado, in la aqoonsado isku xidhnaanshaha qotoda dheer, iyo is ixtiraamida midba midka kale.
Deeqaha | Jawaabteena | Kheyraadka Dheeraadka ah | Xafiisyadayada
Baro waxqabadka aan macaash doonka ah ee la-waafajinta Covid-19 oo leh hal-abuurnimo iyo adkeysiga.
Baro sida McKnight uu u qaaday tillaabooyinka lagu bixinayo dabacsanaan kordha iyo taageerada deeq-bixiyeyaasha inta lagu gudajiro Covid-19.
Soo hel macluumaad ku saabsan deeq-lacageed dheeraad ah iyo dadaallo kale oo aan qaadnay si looga jawaabo coronavirus-ga cusub.
Liiska amaahda dowladda, deeqaha tabaruca, iyo taageerada farsamo ee samafalka iyo kuwa kale.
Shaqaaluhu waxay u shaqeynayaan meel fog waxaana lagu heli karaa emayl ahaan. Annagoo ku siinay waqtigan adag, waxaan u mahadcelineynaa fahamkaaga maadaama xubno badan oo shaqaale ah ay isku dheelitirayaan mas'uuliyadaha shaqsiyadeed iyo kuwa xirfadeed.
Xafiisyadeenu si ku-meel-gaar ah ayey u xiran yihiin dadweynaha, waxaanan joojinay adeegsiga dhammaan goobaha lagu shiro.
Deeq bixiyayaasheena ayaa si adag uga shaqeynaya sidii ay waligood ugu filnaan lahaayeen baahiyaha bulshooyinkayaga, iyagoo sidoo kale dhowraya xasiloonida ururradooda. McKnight wuxuu garab taagan yahay deeq bixiyayaasheena wuxuuna qaadaynaa talaabooyin lagu bixinayo dabacsanaan iyo kordhinta.
Warbixinta Deeqbixinta | 3/19/2020 — Dhibaatada coronavirus-ka dartiis, McKnight wuxuu hirgaliyay muddo saddex bilood ah oo dheeri ah dhammaan warbixinnada jadwalka bixinta. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu jiro xaaladdan aan horay loo arag, deeq bixiyayaashu waxay la hadli karaan xiriirkooda barnaamijka si ay u weydiistaan wax ka beddelka suurtagalka ah ee heshiisyada deeqdooda, sida ujeedka deeqda ama qaab dhismeedka waqtiga.
Ballanqaadka CoF | 3/23/2020 — McKnight, oo ay weheliso maalgeliyeyaasha faceena iyo hoggaamiyeyaasha kale ee qaybta tabaruca, ayaa saxeexay Golaha ballanqaadka ficil ee looga jawaabayo Wadajirka-19 si ay u siiyaan taageero deg deg ah deeq-bixiyeyaashayada iyo shuraakadayada. Tallaabooyinka waxaa ka mid ah: fududeynta ama baabi'inta xaddidaadaha deeqaha hadda jira, dib u dhigista shuruudaha warbixinnada iyo dalabaadka kale ee aan loo baahnayn waqtiga deeq-bixiyeyaasha, iyo ku-biirinta lacagaha degdegga ee ku saleysan bulshada.
Ku-hawlgalayaashayada Caalamiga ah | 3/18 / 2020—Waa kan warqad Waxaan u dirnay Barnaamijyada Cilmi baarista Dalagyada Dalagyada iyo deeq bixiyayaasha Koonfur-Aasiya iyo iskaashatada.
Ku socota Bulshada Fanka | 4/17 / 2020—Aqri warqad furan laga bilaabo kooxda Farshaxanka ee 'McKnight's Arts' illaa deeq-bixiyayaashayada Arts, wada-hawlgalayaasha, iyo bulshada.
Nala soo xiriir—Waxaan ka feejignaaneynaa in ururradu ay la kulmaan caqabado aad u weyn oo uu keenay masiibada, waxaanan higsaneynaa inaan fududeyno qaar ka mid ah culeyska saaran deeq-bixiyeyaasha. Waxaan qiimeyneynaa fahamkaaga iyo fikradahaaga - fadlan la xiriir xiriiriyahaaga aasaasiga ah ama farriin noo soo dir annaga Nagala Soo Xiriir Bogga internetka.
Jawaabta McKnight ee masiibada waxay noqon doontaa mid sii socota iyadoo aan bixinno baahiyaha muddada dhow, iyadoo sidoo kale aan fileyno baahiyo dhex-dhexaad iyo muddo-dheer ah.
Xarunta Horumarinta Afrika—$50,000 si loo taageero qulqulka codsiyada amaahda ganacsiga yar yar ee ay hay'addu ka heshay ganacsatada la soo deristay khasaaraha maaliyadeed ee musiibada.
Waraaqda Furan ee AAPIP—The McKnight Foundation, oo in ku dhow 200 oo ka mid ah maalgeliyeyaasha aannu isku kooxda nahay, ay dhowaan saxiixeen warqad furan oo ka socota Aasiyaanka Aasiyaanka / Jasiiradaha Baasifiga ku yaal ee ku yaal Philanthropy (AAPIP) iyadoo laga jawaabayo nacaybka loo qabo nacaybka loo qabo bulshooyinka Aasiyaanka Aasiyaanka ah sababtuna tahay Covid-19. Waan diidanahay isku day kasta oo lagu been abuurayo ama lagu khiyaaneeyo dadka Mareykanka Aasiyaanka ah.
Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Asian—$50,000 oo loogu talagalay in lagu caawiyo dib u soo kabashada degmada Little Mekong / jaamacadda ku taal St. Paul halkaas oo ganacsiyadu la kulmaan dhibaatooyin dhaqaale oo aad u daran awgood xidhitaanka Covid-19. In kabadan laba iyo toban ganacsiyadeed oo goobta ka jira ayaa la kulmay waxyeelo kale ka dib dilkii George Floyd.
Comunidades Latinas Unidas En Servicio—$100,000 guud ahaan taageerada howlgalka ee ururka, oo ay hogaaminayaan iyo Latinos, si loo joogteeyo shaqaaleynta iyo bixinta barnaamijyada iyo adeegyada sida waxbarashada dadka waaweyn, fasalada kobcinta dhalinyarada, latalinta caafimaadka maskaxda iyo kiimikada, iyo tabobar shaqaalaysiinta taleefanka iyo wadahadalka fiidiyaha.
Barnaamijka Gargaarka Guriyeynta ee-Covid-19—$500,000 si ay gobolka uga taageerto ka baaraandegista kheyraadka federaalka ee CARES Act si looga hortago ka saarista iyo dib u dhigista guryaha sababo la xiriira Covid-19 aafada iyo dib u dhaca dhaqaale. Lacagta CARES Act waxaa sharci ahaan looga baahan yahay in loo isticmaalo sanadka 2020. McKnight wuxuu ku biiray maalgeliyeyaasha kale ee gaarka loo leeyahay ee gobolka oo dhan si ay u bixiyaan ururada ka baaraandegta sanadka 2021, iyagoo hubinaya in reer Minnesota ay si buuxda u heli karaan dhammaan kheyraadka guryaha ee CARES.
Shirkadda Horumarinta Xaafadda East Side—$50,000 si loo taageero ganacsiyada yaryar iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha ee degmada ganacsiga Paul ee Payne Avenue.
Iskaashiga Saaxiibtinimada Caalamiga ah—$100,000 ee ku aaddan deeqaha mutadawacnimada ah ee lagu taageerayo ururada mataanaha ah ee mataanaha ah ee ka shaqeeya hubinta in lacagta gobolka iyo federaalku ay siiyaan gaadiid aamin ah oo aamin ah shaqaalaha muhiimka ah. Lacagaha ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona samaynta xalal muddada-dheer ah oo bixiya goobo dadweyne oo ka caafimaad badan in loogu safro si nabad ah cag iyo baaskiil.
Machadka Great Plains ee Horumar waarta—$250,000 si loo taageero Midwest Energy Iskaashiga dhiirigelinta federaalka iyo dadaallada dib u soo kabashada leh ee hadafka ah in sifiican dib loo dhiso kadib Covid-19.
Headwaters Foundation Caddaaladda—$100,000 oo lagu taageerayo Sanduuqa Maaliyaddeeda Koowaad, si loo taageero Madow, Dadka asaliga ah, iyo dadka midabka leh ee soo ifbaxaya kala duwanaansho bulsheed, siyaasadeed, iyo dhaqaale oo ka dhaceysa masiibadaas. Lacagaha ayaa sidoo kale aadi doona ururada taageera Aasiyaanka Mareykanka iyo Jaziiradaha Jasiiradaha Baasifigga iyo kuwa ka shaqeynaya la-dagaallanka shisheeyaha sii kordhaya ee ku wajahan Aasiya Americans.
Bulshada Hope—$100,000 oo loogu tala galay barnaamijyada farshaxanka farshaxan si loo sii wado dhisida bulshada, isku xirnaanta, iyo barashada wajiga masiibada.
Xarunta Caddaalada Guriyeynta—$250,000 si looga jawaabo helitaanka guryaha iyo xasilloonida ka jirta Minnesota, taasoo ka dhalatay coronavirus.
Xarunta Diinta ee Bayaanka Maalgelinta Masuuliyada Shirkadeed—McKnight, oo ay weheliso 118 hay'adood oo leh $2.3 trillion oo isku darka hantida, ayaa saxeexay bayaan ay ku baaqayaan in la kordhiyo ilaalinta shaqaalaha ka shaqeeya hilibka iyadoo la raacayo Covid-19. Bayaanka waxaa lagu muujiyey khataraha ku jira shaqaalaha hilibka waxayna soo bandhigayaan talooyin badbaadin doona dhammaan dadka ay quseyso — shaqaalaha, iyo waliba kordhinta, qoysaskooda iyo bulshooyinka.
Farshaxanada isboortiga—$100,000 guud ahaan taageerada howlgalka si loo dardar geliyo barnaamijyada kombiyuutarka ee tooska ah iyo kuwa la isku habeeyay inta lagu jiro taxadarka joogitaanka guriga-19.
Golaha Waddada Lake Street—$100,000 oo lagu taageerayo degmada East Lake Street ee Minneapolis, oo ay hoy u yihiin qoysas aad u tiro yar iyo makhaayado ay leeyihiin muhaajiriin iyo dukaamo raashin oo xirnaa ama si weyn loo xaddiday inta lagu jiray tallaabooyinka xiridda isku-xirka gobollada-19. Aagga waxaa soo foodsaaray dhibaato kale markii daraasiin ganacsiyadeed ah ay burbureen ama burburiyeen wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd.
Xarunta Horumarinta Dhaqaalaha Latino—$75,000 oo loogu talagalay bulshada ganacsatada Latino ee gobolka Minnesota, lana siiyo raasamaal, kobcinta waxbarashada, iyo hormarinta dadaallada soo kabashada.
Iskuduwaha Metropolitan ee horumarinta bulshada—$75,000 si loo taageero dib u furista ganacsiyada yaryar ee ay leeyihiin dadka Madoow, Dadka asaliga ah, iyo dadka midabka leh ee lagu qasbay in la xiro inta lagu gudajiray xidhitaanka Covid-19 ee Minnesota.
Ururka Horumarinta Dhaqaalaha ee Metropolitan—$75,000 si ay u bixiyaan soo kabashada iyo dib-u-habeynta kaalmaynta farsamo ee ganacsiyada ay leeyihiin dadka Madoow, Dadka asaliga ah, iyo dadka midabka leh ee ay saameysay Covid-19 iyo in ay soo jiidato raasamaal si ay ganacsiyadan u siiso maalgelin biriij ah si ay u sii wanaajiso iyaga si ay uga badbaadaan hoos u dhaca dhaqaale.
Sanduuqa Mni Sota—$100,000 si ay awood ugu siiso hay'addan horumarinta dhaqaalaha bulshada Native inay sii waddo shaqadeeda si ay u hormariso kor u qaadista iskaashatada, ganacsiga, iyo awoodaha maaliyadeed ee ragga iyo dumarka Mareykanka Hindi ah ee ku nool Minnesota oo dhan.
Sanduuqa Soo-kabashada Musiibada ee Minnesota—$100,000 sanduuqa soo kabashada ee ay maamusho Saint Paul iyo Minnesota Foundation. Maaliyaddeena ayaa loo qeybin doonaa Aasaasiyadeedka Minnesota waxaana loo adeegsan jiray taageeridda baahiyaha tooska ah ee shakhsiyaadka, qoysaska, iyo ganacsatada yaryar ee ay ugu wacan tahay saameynta coronavirus.
Machadka Horumarinta Bulshada Asaasiga ah ee Maraykanka—$100,000 ee taageerada guud ee hawlgalka si loo sii wado barnaamijyada iyo istiraatiijiyadda horumarinta si loo xoojiyo jiritaanka iyo wanaagga dadka Indian Indian iyo bulshooyinka.
Xarunta Horumarinta Deriska—$75,000 si loo siiyo ganacsatada maxalliga ah amaah bixinno iyo caawimaad farsamo, oo ay ku jiraan adeegyada khadka tooska ah, suuq geynta, iyo soo qaadista wadada, iyo sidoo kale taageerida dib loogu furayo dadweynaha kadib xiritaanka Covid-19.
Sanduuqa Wergo Cusub—$250,000 oo loogu talo galay Sanduuqa Waxhaqanka ee La aaminay in lagu taakuleeyo dadaallada aan xisbiyada ka dhaxayn si loo hubiyo doorashooyin xor iyo xalaal ah oo 2020 ka dhaca Minnesota.
Shabakadda Fursadaha Dhaqaale ee Waqooyi—$50,000 si loo taageero meheradaha waqooyiga Minneapolis ee ay khasaarooyinka lacageed ee weyn ka soo gaadhay isku xidhkii gobolka Covid-19.
Pillsbury United Community—$100,000 si ay u taageeraan farshaxan yahanada iyo abuuritaanka qaab ciyaareed muusiig ah Golaha Masraxa ee Pillsbury House.
Saint Paul & Minnesota Foundation—$50,000 ilaa Sanduuqa Hoylaawe ee Minnesota, fahamka inaan dhamaanteen nahay sida badbaado oo kaliya sida kuwa ugu halista badan. Lacagta ayaa gacan ka geysan doonta kordhinta booska hoyga iyo ilaha muhiimka u ah dadka ay soo food saartay hoy la’aan iyo amni darrooyinka.
Xilliga guga ee Farshaxanka 'Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Shaqsiyeed ee la ballaariyey—$50,000 oo lagu taageerayo sanduuqa gargaarka degdegga ah oo gargaar toos ah siiya fanaaniinta.
Ururka Ganacsiga Baanka ee Galbeedka—$25,000 ee taageerada guud ee hawlgalka si looga caawiyo degmada ganacsiga West Bank in si nabadgelyo ah dib loo furo, siiso khibrad sharciyeed ganacsiyada yaryar ee raadinaya kaalmada federaalka, iyo sii wadida hormarinta daruuriga dhaqaalaha deegaanka.
Isbahaysiga West Broadway Coalition—$25,000 si loo taageero ganacsiyada yar yar iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha degmada ganacsiga ee West Broadway ee woqooyiga Minneapolis, oo khasaaro dhaqaale ka soo gaadhay Covid-19, iyo waliba wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd.
Xarunta Dhexe ee Galbeedka—$40,000 si loo taageero Shaqada Carruurnimada Hore ee Minnesota, waax badan, isbahaysiga gobolka oo dhan ayaa diiradda saaray kordhinta magdhowga, tababarka, iyo ilaha loogu talagalay barayaasha ilmanimada hore. Lacagaha ayaa gacan ka geysan doona sidii loo hormarin lahaa xalalka siyaasadeed ee lagu taageerayo xirfadleyda daryeelka carruurta ee Minnesota-shaqaalaha muhiimka u ah ee isku arka safka hore ee cudurka, halka ay kasbadaan wax ka yar mushaarka lagu bixin karo.
Waxaan fahamsanahay in masiibadaani ay dhaawacday faa iido badan. Ka sokow agabyada dowladda ee aan macaash doonka ahayn, waxaan si niyad jab leh uga helnay jawaabcelinta maal-galayaashayada iyo iskaashatada kale ee bulshada. Hoos waxaa ku taxan qaar ka mid ah agabyada la keydiyey, oo ay ku jiraan amaahda la cafin karo, kaalmada farsamada, maalgelinta jawaab-celinta ee aan faa'iido-doonka ahayn, taakuleynta farshaxanada shaqsiyadeed, iyo inbadan.
Golaha Minnesota ee Macaashka bixisaa dulmar guud oo waxtar leh ee sida Coronavirus Aid, Relief, iyo Sharciga Amniga Dhaqaalaha (CARES Act) u saameeyo faa'iido-darrooyinka. Tusaale ahaan, nonprofits waxay awoodi karaan inay helaan amaahda ganacsiga yar yar, magdhawga macaashka shaqaalaha, dhibcaha canshuurta mushaarka, iyo taageerooyinka kale. The $2 trillion CARES Act, oo la saxeexay sharciga bisha Maarj 27, 2020, waxay bixisaa maalgelin lagu taageerayo shakhsiyaadka iyo ganacsiyada ay saamaysay Covid-19 iyo hoos u dhaca dhaqaale ee keenay.
The Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay Barnaamijka Ilaalinta paycheck. Barnaamijkani wuxuu bixiyaa amaah bixin kara suurtagal ah oo loogu talagalay dadka aan macaash doonka ahayn 2,5 jeer celceliskooda mushaharka billaha ah ilaa $10 milyan. Ururadu waxay dalban karaan bangigooda.
Dhiirigalin Dakhliga Kale waxay bixisaa kaalmo farsamo oo aan qiimo jaban kubixin faa'iido-doonka iyo la-tashiyo bilaash ah oo la xiriira maaliyadda, istiraatiijiyadda, iyo dowladnimada ka dib masiibada.
Abaalka Qaranka ee Farshaxanka waxay u qaybineysaa $75 milyan oo gudaha ah gargaarka gargaarka oo ay bixiso Sharciga CARES ururada fanka oo wadanka oo dhan ah.